Global Voices teny Malagasy » Manao Vela-Tsehatra Momba Ny Media Marolafy Amin’ny Fiteny Miskito sy Mayangna Ny Mpianatra · Global Voices teny Malagasy » Print
Manao Vela-Tsehatra Momba Ny Media Marolafy Amin'ny Fiteny Miskito sy Mayangna Ny Mpianatra
Voadika ny 09 Desambra 2016 15:27 GMT 1	 · Mpanoratra LaToya Hinton Nandika (en) i Teodora C. Hasegan, Miranah
Ity no lahatsoratra fahadimy momba ny tetikasa “Miskito sy Mayangna ao amin'ny aterineto”, mpandresy nahazo ny vatsy 2015 tamin'ny antso ho fanohanana ny fisantaran'andraikitra momba ny fikatrohana nomerika ho an'ny fiteny vazimba teratany. Tontosaina ao Nikaragoà ny tetikasa amin'izao fotoana izao ary kinasa ny hanamafisana orina ny fiteny eo an-toerana amin'ny alalan'ny fandraisana anjara mavitriky ny tanora.
Tamin'ny fiafaran'ny tetikasa “Miskito sy Mayangna ao amin'ny aterineto,” nikarakara fifanakalozan-kevitra roa ny mpianatry ny Sekolin'ny Fitarihana Olona mba hampisehoana ny vokatr'izy ireo farany amin'ny mpianatra sy ny mpampianatra ao amin'ny Oniversiten'ny Faritra Mizakatena ao amin'ny Morontsiraka Karaiba Nikaragòana  (URACCAN).
Nandritra ny fifanankalozan-kevitra voalohany tao amin'ny Sekolin'ny Fitarihana Olona, lahatsary telo no naseho: “AIDS wal iwanka (SIDA) “, “Bullying (Fampitahorana) “, ary ny “Fanavakavahana Ara-Poko “. Narahina fifanakalozan-kevitra mikasika ny lohahevitry ny lahatsary sy ny fomba ifandraisany amin'ny fianarana ny fiarahamonina sy ny fiaranarana ny toetsaina ny fandefasana horonantsary, ary ny maha zava-dehibe ny fampiasana ny teny Miskito sy Mayangna eo amin'ny indray mihira vaovao ao amin'ny vondrom-piarahamonina manodidina ny Morontsiraka Karaiba Avaratra ao Nikaragòa.
Ao amin'ny fifanakalozan-kevitra voalohany, namaly ireo fanontaniana momba ny maha zava-dehibe ny fampandrosoana ny media marolafy amin'ny fiteny Miskito sy Mayangna, ny ny antony nahatonga azy ireo nisafidy hifantoka amin'ny lohahevitra toy ny aretina azo avy amin'ny firaisana, ny fampitahorana, ary ny fanavakavahana eo amin'ny vondrona ara-poko ny mpianatra. Tamin'ny fiafaran'ny fifanakalozan-kevitra, narahan'ny mozika Miskito ny fampisehoana dihy nentin-drazana, ary nisy ny fanomezana sakafo hariva ahitana sakafo sy zava-pisotro nentim-paharazana avy ao amin'ny faritra.
Tamin'ny fifanakalozan-kevitra faharoa no nampahafantarana ireo rakibolana telo teny miisa anankiroa: “Yala” sy “Slilma Diara Nani Nina “. Nampahafantarina ihany koa ny sarimiaina antsoina hoe “Pamali Painkira” sy ny tranonkalan'ny tetikasa. Nanazava ireo mpianatra ao amin'ny Sekolin'ny Fitarihana Olona fa zava-dehibe ny fampandrosoana ireo fitaovana [votoaty] nomerika amin'ny teny Miskito sy Mayangna ireo satria tsy mbola misy ny fandaharana fialam-boly amin'ny fahitalavitra amin'ireo fiteny ireo. Mifandraika amin'ny famoronana rakibolana nomerika, nanazava ny sasany tamin'ireo mpampianatra fa nentim-paharazana ny fampitana am-bava ny teny indizeny ao an-toerana, ka fomba iray hanohanana ny fampandrosoana ny lovan-tsofina ny manampy tahirim-peo hanaovana rakibolana nomerika telo teny, ary koa hampiroboroboana ny fahaizana manoratra amin'ireo fiteny roa ireo, tahaka ny nanaovana azy amin'ny teny espaniola sy teny anglisy.
Nanazava ny antony mahatonga azy ireo hisafidy ny lohahevitra notantaraina tamin'ny lahatsary ny mpianatra rehetra, lohahevitra izay matetika mifandray amin'ny toe-javatra tena iainana hitan'izy ireo ao amin'ny fiarahamonina. Nilaza ny fijoroana vavolombelona sasany nataon'ny mpianatra fa misy ny filàna maika:
Nanazava ny mpianatra iray fa nilaina atao amin'ny teny indizeny ny fampianarana bebe kokoa momba ny VIH sy ny SIDA ka nahafahany nahafantatra fa tratran'ny tsimok'aretina ny sasany ao amin'ny fiarahamoniny ary voafetra ny fahazoana fikarakarana ara-pitsaboana noho ny hamenarana fa voan'ny tsimok'aretina. Nanazava koa ny mpianatra iray hafa fa namono tena ny mpianatra sasany niharan'ny fampitahorana imbetsaka, noho izany tokony hanao zavatra ao amin'ny fiaraha-monina eo an-toerana izy ireo mba hanao fanairana momba ny dikan'ny fampitahorana sy ny fomba hampitsaharana ity fitondran-tena ity. Tsy hay nakifika mihitsy ny iray tamin'ireo mpianatra amin'ny famitana ny fanentanana nataony nifantoka tamin'ny ray aman-dreny sahirana miasa ka tsy manana fotoana betsaka hiarahana amin'ny zanany. Nandrakitra ny fitantarana hanaovany ny fanentananyamin'ny teny Miskito manontolo miaraka amin'ny fanampiana kely avy amin'ny havany sy ny mpampianatra azy izy. Rehefa nanontaniana ny antony nisafidianany ny lohahevitra izy, dia nanazava fa zavatra tsy maintsy atrehin'ny tanora ao Bilwi-Puerto Cabezas izany, noho ny zava-misy ara-toekarena amin'ny asa sy ny karama ambany, dia tsy maintsy miasa ny ray aman-dreny roa tonta ka matetika mahatsiaro ilaozana sy tavela irery ny zanak'izy ireo vokatr'izany.
Ho famaranana, nisokatra tamin'ny firesahana lohahevitra vaovao ny mpianatra tao amin'ny Sekolin'ny Fitarihana Olona rehefa avy nandinika ny toe-javatra miantraika amin'ny fiarahamonin'izy ireo manokana. Toerana tsara niresahana ny maha zava-dehibe ny votoaty media marolafy amin'ny fiteny vazimba teratany, sy ny tsy rariny mitranga ao amin'ny fiarahamonina ao an-toerana sy ao amin'izao tontolo izao amin'ny fomba fijerin'ny vazimba teratany ny oniversiten'i URACCAN.
Ny mpanatrika nandritra ny fifanakalozan-kevitra voalohany tamin'ny fampahafantarana ny vokatra avy amin'ny Sekolin'ny Mpitarika Olona.
Farany, misaotra ireo rehetra nanohana ka nahatratrarana ny tanjona tamin'ity tetikasa fikatrohana nomerika amin'ny teny Miskito sy Mayangna ity izahay.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/12/09/93223/
 Oniversiten'ny Faritra Mizakatena ao amin'ny Morontsiraka Karaiba Nikaragòana: http://www.uraccan.edu.ni/
 AIDS wal iwanka (SIDA): http://llynnh.wixsite.com/multimedia-miskitu/sida-wal-iwanka
 Bullying (Fampitahorana): http://llynnh.wixsite.com/multimedia-miskitu/el-bullying
 Fanavakavahana Ara-Poko: http://llynnh.wixsite.com/multimedia-miskitu/discriminacion-racial
 Slilma Diara Nani Nina: http://llynnh.wixsite.com/multimedia-miskitu/slilma-diara-nani-nina